तिथि मेरो पत्रु »7न्यूयोर्क शहर सबैलाई मा जान्छ तिथिहरु
तपाईं आफ्नो साथी संग न्यूयोर्क शहर हो भने, निश्चित तपाईं यस पेज मार्फत पढ्न केही मिनेट विलम्ब बनाउन. तपाईं एकल र शहर मा एक साथी को खोज हो भने पनि छलफल बाहिर जाँच गर्नुहुन्छ; आफ्नो पाएको प्रेम लागि यी मध्ये एक बाहिर प्रयास पक्कै राम्रो प्रभाव सिर्जना गर्न तपाईंलाई मदत गर्नेछ. त्यसैले, यहाँ सात मिति न्यूयोर्क शहर देखि हरेक हिंड्छ हो (जानुपर्छ पढ्न) मा.
1. यो कढाई देखि सूर्यास्त हेर्ने
युवा जोडे लागि, हडसन मा यस ठाउँमा पक्कै पनि सबै भन्दा डेटिङ गन्तव्य शहर वर्तमान घर को एक छ. यो पान, जो मूलतः एक जलमग्न lightship छ 1929, पुनरुत्थान र आज यो के तपाईंले कहिल्यै पाउनुहुनेछ सबैभन्दा बिजुली गोता बारहरू को एक हो लिइन्.
हडसन नदी मा सूर्यास्त को दृष्टिकोण पक्कै जुटाकर छ र पट्टी को परिवेश गर्न रोमान्स को एक स्पर्श भन्छन्.
2. ब्रुकलिन वनस्पति उद्यान मा एक रोमान्टिक दिउँसो खर्च
जस्तै नै तिमी प्रत्याशा हाइट्स मा यस शहरी उद्यानलाई प्रविष्टि रूपमा, तपाईं शहर को ऊधम र हलचल देखि टाढा आएका छन् भने तपाईं महसुस हुनेछ.
ब्रुकलिन वनस्पति उद्यान धेरै घन्टा को लागि लगी तपाईं र तपाईंको साथी राख्न पर्याप्त प्राकृतिक धन छ; उदाहरणका लागि, मूल निवासी फ्लोरा उद्यान, यो Cranford रोज गार्डेन, यो शेक्सपियर बगैचा र अधिक. तथापि, के तपाईं सबै भन्दा स्थान बारे जस्तै हुनेछ तपाईं शहर को सबै भन्दा अन्य भागमा प्राप्त गर्न संघर्ष सान्त्वना छ.
3. यो Flushing खाना मल एक यात्रा
Flushing मा खाना मल, न्यूयोर्क शहर स्वादिष्ट क्यान्टोनिज र सुन्तला व्यञ्जन लागि प्रसिद्ध छन्.
यो सबै ती वास्तविक हो foodies लागि एक सिद्ध मिति हुनेछ. तिनीहरूले सामाजिक नेटवर्क मा छ हरेक भोज पोस्ट तस्बिरहरू बानी संग व्यक्तिहरूले पनि एकदम Enthralling यस डेटिङ विचार पाउनुहुनेछ.
4. समयमा फिर्ता यात्रा:
गिरावट को समयमा आफ्नो साथी संग केहि महान समय खर्च गर्न हेर्दा? कन्निंगहैम पुरानो गाउँमा एक ऐतिहासिक घर मा एक मिति योजना.
5. केन्द्रीय पार्क एक यात्रा
सेन्ट्रल पार्क गर्मी महिनामा आफ्नो साथी संग जान एक महान ठाँउ हो. यो न्यूयोर्क शहर गर्मीयाम सामान्यतया taxingly ओसिलो हो त्यो सत्य हो; तथापि, सूर्य तल जान्छ पटक मौसम रमाइलो हुन्छ. फलस्वरूप, गर्मी महिनामा, तपाईं सजिलै खुला मा साँझ तिथिहरु योजना गर्न सक्छ.
सेन्ट्रल पार्क, सबै मनोरञ्जन विकल्प संग यो छ, एक तिथि मा जाने को लागि एक महान ठाँउ पक्कै छ.
6. यस Slipper कक्ष मा एक हंसी छ
मंगलवार रात आफ्नो साथी संग बाहिर जान को योजना? तिमी जूता कक्ष द्वारा रोक विचार गर्न सक्छौं. हरेक मंगलवार, यो burlesque स्थल सेत हर्जोग गरेको कमेडी शो अवस्था. उहाँ, हर्जोग अक्सर आफ्नो अद्भुत र उल्लसित आमा छ.
7. ब्रायंट पार्क मा एक फिलिम मिति Enjoy
यो चलचित्र प्रेमियहरुको र क्लासिक सबै ती प्रशंसक लागि एक सिद्ध मिति हुनेछ; तर, ब्रायंट पार्क सधैं सोमवार योजना गर्नुपर्छ मा एक फिलिम मिति सम्झना.
हरेक सोमवार, साँझपख, एक आउटडोर चलचित्र यस निजी व्यवस्थित सार्वजनिक पार्क मा देखाइएको छ. केही नाश्ता, रक्सी र एक कम्बल एक बोतल आरामदायक तपाईं को दुई एक रोमान्टिक चलचित्र तारीख छ लागि पर्याप्त हुनेछ राख्न.
तपाईं न्यूयोर्क शहर सबैभन्दा रोमान्टिक साइट आफ्नो साथी लिन सक्छ, तर मिति एक सफल एक बनाउन, तपाईं मुख्य घटक आवश्यक छ र त्यो प्रेम हो.
नारीहरूले सिद्ध मानिस के चाहन्छौ?